ကောင်းကင်ကို: ချောင်းဟန့် သံ (ဂျိုဇော်)
ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်၊ ကိုယ့်အတွက်လည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အကျင့်ကြီးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြိုးစားဖျောက်ဖျက်ပစ်ရမယ်။
သို.သော် ကြိုးစား ဖျောက်ဖျက် မရခင် ကျွန်တော့်အကျင့်ကြီးနဲ. မလုံမလဲ လောကကြီး ဘယ်လောက်ထိ ပြဿနာတက်ကြဦးမည်လဲ မသိ။
အခုကို လည်ချောင်းထဲက ယားနေပါသည်။
လည်ချောင်းတစ်လျှောက် ကင်းခြေများတစ်ကောင် တက်လာသလိုမျိုး ရွစိ ရွစိ၊ ယားကျိ ယားကျိနှင့် အခံရခက်လှသည်။ တံတွေးတွေ ဂလု ဂလုနှင့် မျိုချနေရသော်လည်း ဝေဒနာသည် သက်သာမသွား။ ပျောက်မသွား။ တစ်ကိုယ်တည်း ကြားလောက်ရုံ တအင်းအင်းနှင့် ခံတွင်းရှင်းကြည့်တာလည်း မရ။ အားရပါးရ ချောင်းဟန့်လိုက်ရလျှင် လည်ချောင်းထဲ ယားယံ၊ ကပ်ငြိ၊ ပိတ်ဆို.နေတာတွေ ချက်ချင်း အနေချောင်သွားမည်ကို သိသော်လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဟန်.နိုင်သေး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ရသေးသည်။ အခြေအနေကောင်းပြီ ထင်မှ အားရပါးရ ချောင်းဟန်.ချလိုက်သည်။
သည်ဝေဒနာ သည်အကျင့်ကြီး ဘယအချိန်က ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ခိုဝင်ပုန်းအောင်းနေခဲ့သည် မသိ။ ယခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်မှာ အနုကြမ်းစီး ခံရသလိုမျိုး ခံစားနေရပါပြီ။
ဝေဒနာသည် ဗြုန်းဒိုင်းကြီး ကောက်ကာငင်ကာ ရောက်လာသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ ပထမ လည်ချောင်းကလေး ယားတယ်ဆိုရုံ၊ အာခြောက်တယ် ဆိုရုံမျှလောက်ပင်။ တံတွေးမျိုချလိုက်လျှင် ဝေဒနာပျောက်ကင်းသွား၏။ ရေ သို.မဟုတ် ရေနွေးတစ်ခုခု မျိုချလိုက်လျှင်လည်း ပျောက်၏။ တစ်နေ. ဘယ်နှစ်ခါဖြစ်လို. တံတွေးဘယ်နှစ်ခါ မျိုရတယ် ဆိုတာကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်၏ ဝေဒနာနှင့် တုံ.ပြန်မှုသည် အသိစိတ်မဲ့စွာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြစ်ပွားနေခဲ့သည်ဟု ဆိုရပါမည်။
ထိုသို. ထိန်းချုပ်မှုမဲ့ လွတ်လပ် အပြုအမူတစ်ခုသည် စွဲမြဲသော အကျင့် တစ်ခုဆီသို. ဦးတည်နေမှန်း အစက ကျွန်တော်မသိခဲ့။ သိမိ၊ သတိထားမိသည့် အချိန်မှာတော့ နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။
နောက်ပိုင်း လည်ချောင်းယားယံလာသောအခါ၊ တစ်ဆို.ဆို. ဖြစ်လာသောအခါ တံတွေးမျိုချရုံ၊ ရေသောက်ရုံနှင့် မသက်သာတော့။ အာရုံ မပြေတော့။ တစ်ကိုယ်တည်း ကြားလောက်ရုံ ခံတွင်းရှင်းလိုက်ရမှ။ ချောင်းဟန်.သံမျိုး ပြုလိုက်ရမှ သက်သာရာ ရတော့၏။ အာရုံပြေတော့၏။ သည်အခြေအနေအထိလည်း ကျွန်တော့်အတွက် ပြဿနာ မရှိသေးပါ။ အလုပ်လုပ်ရင်း၊ စကားပြောရင်း သွားလာရင်း ခန္ဓာကိုယ်က သူ.ဟာသူ ဖြေရှင်းနေခြင်း ဖြစ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်ပင် မသိလိုက်။ သတိ မထားမိလိုက်။ (အကျင့်ဖြစ်နေပြီဟုတော့ ဆိုနိုင်ပါသည်။)
တဖြည်းဖြည်းနှင့် ချောင်းဟန်.သံက ဒီဂရီ တိုးလာ၏။ တစ်ကိုယ်ကြားမှ နှစ်ကိုယ်ကြားသံလောက် ဖြစ်လာ၏။ နှစ်ကိုယ်ကြားသံလောက် ချောင်းဟန်.မှ သက်သာရာ ရ၏။ သို.သော် ပြဿနာ မဟုတ်သေး။ ချောင်းဆိုးတာလည်း မဟုတ်။ သလိပ်ဟန်.တာလည်းမဟုတ်၊ နှုတ်ခမ်းစိ၊ ပါးစပ်ပိတ်လျက် အသံထွက်ရုံကလေး ချောင်းဟန်.တာဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပါ။ သိပင် မသိကြပါ။
သို.သော် ချောင်းဟန်.သံကတော့ ကျွန်တော့် သတိကွယ်ရာမှာ တစ်စတစ်စ အတင့်ရဲ ကျယ်လောင်လာတော့၏။ နှုတ်ခမ်းစိ၊ ပါးစပ်ပိတ် “အဟွန်း” မှ နှုတ်ခမ်းဖွင့်၊ ပါးစပ်က “အဟမ်း” အထိ ဖြစ်လာ၏။ မသိမသာမှ သိသိသာသာ ဖြစ်လာ၏။ ပထမဆုံး သိသိသာသာဖြစ်သည့်နေ.ကို ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိနေပါသည်။
ထိုနေ့က ကျွန်တော်တို. ရုံးမှာ (ကျွန်တော်သည် စာရေးကြီးအဆင့်ရှိ ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပါ၏။) ဦီးစီးမှူး
အပြောင်းအလဲ မိတ်ဆက်ပွဲ လုပ်ပါသည်။ ပြောင်းသွားသော ဦးစီးမှူးမမနေရာတွင် အစားဝင်လာသော ဦးစီးမှူးဆရာက နှုတ်ခွန်းဆက် မိန့်ခွန်းခြွေပါသည်။ နောက်တန်းတစ်နေရာမှာ ထိုင်ရင်း ကျွန်တော်က ဝေဒနာကို အားရပါးရ ပါးစပ်ဟ ဖြေရှင်းနေဆဲ။
“ ဟိုနောက်က တဟမ်းဟမ်းနဲ. ချောင်းဆိုးနေဆဲ ပုဂ္ဂိုလ် ဘာပြောချင်လို.လဲ။ ထပါ။ ပြောပါ။”
ဟု ကျွန်တော့်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ခပ်ဆတ်ဆတ် ပြောလေသည်။
ကျွန်တော်လည်း ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ မတ်တတ်ရပ်ပြီး…
“ ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး ဆရာ။ ချောင်းဟန်.တာက အကျင့်ပါနေလို.ပါ” ဟု ဖြေလိုက်ရာ ၀ါးခနဲ ပွဲကျသွားပါသည်။
“ရှင် တော်တော်နောက်တဲ့လူ” ၊ “ ခင်ဗျား တော်တော် နောက်တယ်ဗျာ ” ဟု အစည်းအဝေး ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းပြောကြပါသည်။ ဦးစီးမှူးကိုယ်တိုင်က “ ဒီရုံးမှာ ဒီလူက လူပြက်လား” ဟု မေးသည်ဟု ကြားရပါသည်။
ထိုနေ.သည် ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ခိုးဝင်နေသော အကျင့်ဆိုးကြီး လူပုံအလယ်မှာ လက်ပူးလက်ကြပ်မိသော နေ.ပင်ဖြစ်ပါ၏။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အနှောင့်အယှက် ပေးလာပြီဖြစ်သော အကျင့်ကြီးကို ကျွန်တော် ကြိုးစားနှိပ်ကွပ်ပါသည်။ ခက်တာက ဖိလေ ကြွလေ၊ နှိပ်ကွပ်လေ ရုန်းထလေ ဆိုသလို သတိထားနေကာမှ လည်ပင်းက ပိုယားသည်။ ပိုပြီး ချောင်းဟန့်ချင်သည်။ တစ်ယောက်တည်း နေချိန်မှာ ပြဿနာမရှိ။ လူတောထဲမှာ ဆိုလျှင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် နိုင်လှသည်။ လက်ကိုင်ပုဝါနှင့် ဇွတ်ဖိပြီး တခွီးခွီးဖြစ်နေတာတို.၊ အိမ်သာထဲ အမြန်ပြေးဝင်ရတာတို.၊ လူရှင်းတဲ့နေရာ ခပ်သွက်သွက်သွားပြီး ချောင်းဟန်.ပစ်ရတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာသည်။
လက်နှိပ်စက်စာရေးမလေး ဦးစီးမှူးအခန်းထဲ အ၀င်၊ အခန်းဘေးမှာက စာရေးတွေ၊ စားပွဲတွေ ကိုယ်စီနှင့်။ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိနေသော ကျွန်တော်က ကောင်မလေး အခန်းထဲ ရှိနေချိန် ချောင်းမဟန်.မိအောင် ကြိုတင်ပြီး ချောင်းဟန်.ထားသည်။ ကောင်မလေးက မျက်စောင်းထိုး၏။ ကျန်တဲ့စာရေးတွေက ပြုံးစိ ပြုံးစိ။ ကိုယ့်ဝေဒနာနှင့် ကိုယ်မို. ကျွန်တော်ကတော့ ဂရုမစိုက်နိုင်အား။ အလုပ်တွေ ဖိလုပ်ရင်း နောက်ထပ် လည်ပင်းမယားခင် ကောင်မလေး ပြန်ထွက်ပါစေဟု ဆုတောင်းနေရသည်။ သို.သော် ဆုတောင်းကား မပြည့်။ အခန်းထဲမှာ ဦးစီးမှူးနှင့် ကောင်မလေးကလည်း စကားမပြတ်သေး။ လည်ချောင်းထဲက ကင်းခြေများတစ်ကောင် တက်လာသလို ရွစိ ရွစိနှင့် မခံနိုင်အောင် ယားလာတော့၏။ တံတွေးမျိုချလည်းမရ။ တိုးတိုးလေး ခံတွင်းရှင်းတာလည်း မရ။ စားပွဲပေါ်က ရေ မော့သောက်တာလည်း မရ။ အာရုံစိုက်လေ ပိုယားလေ၊ ထိန်းထားလေ ပိုပြီး ချောင်းဟန်.ချင်လာလေ။ ထိန်းမရတော့။ ကျွန်တော် နေရာက ထသွားမှ ဖြစ်တော့မည်။ စားပွဲက အထမှာပဲ အဟမ်း ဟူသော ချောင်းဟန်.သံကြီးသည် မိုးခြိမ်းသလို ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ထွက်သွားတော့၏။
မရှေးမနှောင်းပင် ဦးစီးမှူး၏ ဆင်နားရွက်တံခါး ၀ုန်းခနဲ ပွင့်လာကာ-
“ ခင်ဗျား ဘာသဘောလဲ။ ဒါ ရုံးဗျ။ တာဝန်ချိန်ဗျ။ လူကြီးလူကောင်းတွေ အလုပ်လုပ်နေကြတာ။ ကလေကချေ ဆန်ဆန် အပြောင်အပြက်တွေ မလုပ်ပါနဲ.”
ဦးစီးမှူးသည် အလွန်ပင် ဒေါသထွက်နေပုံ ရ၏။ မျက်နှာကြီးနီမြန်းပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ် ဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်။ ကျွန်တော့မှာလည်း နေရာက ထပြီးသားမို. ကုန်းကုန်းကွကွကြီး ဖြစ်နေသည်။ ကြောက်တာရော အားနာတာပါ ပေါင်းပြီး ဘာက စပြောရမှန်းမသိ။
“ မ…. မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ။ အ…. အကျင့်ပါနေလို.ပါ။ ခုကို အပြင်ထွက်…..”
“ တော်ဗျာ၊ ခင်ဗျား နှစ်ခါရှိပြီ၊ သုံးခါအထိတော့ သည်းမခံနိုင်ဘူး”
ဦးစီးမှူးသည် သူ.ဒေါသ သူပြန်ထိန်းသွား၏။ သူ ဆွဲထိုးလည်း ကျွန်တော် ခံရုံပင်။ သူ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြောလည်း ခံရုံပင်။ သို.သော် သူ.ဒေါသ သူ ချွန်းအုပ်နိုင်သွား၏။ ကျွန်တော်ကသာ…..။
ထိုနေ.က အဖြစအပျက်တွေမှာ ဘယ်သူမှ ကျွန်တော့်ဘက်က မရှိ။ ကျွန်တော့်ကို နားမလည်ကြ။ ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေက ဗြောင်ပင် ဝေဖန် ရှုတ်ချ၏။ မရင်းတရင်း မိတ်ဆွေတွေ ခပ်တန်းတန်း ဖြစ်ကုန်သည်။ သူစိမ်းတွေကတော့ တမင်ပင် ဝေးဝေးက ရှောင်ကြတော့၏။
သည်လို အလုပ်ခွင်မှာ နာနာကျင်ကျင် ဖြစ်ခဲ့ရသဖြင့် ဝေဒနာကြီးကို ထိန်းထားနိုင်ပြီလား မမေးနှင့်၊ ပိုလို.သာ ဆိုးလာချေသေး၏။ သတိထားလေ ဆွပေးသလို ဖြစ်လေ။ ထိန်းချူပ်ထားလေ ပေါက်ကွဲချင်လေ။ ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ သတိနှင့် နေပါသည်။ ကျွန်တော့်ဝေဒနာက ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်ကွပ်ထားလို. မရ။ တစ်ချက် တစ်ချက် ပေါက်ကွဲခွင့် ပေးထားလျှင် အခါကျဲ နေတတ်ပါသည်။ စိတ်ပိုင်းအရကော ရုပ်ပိုင်းအရပါ နေသာ ထိုင်သာ ရှိပါသည်။ ထိုကြောင့် တစ်ယောက်တည်း ရှိနေချိန်မှာ သို.မဟုတ် ချောင်းဟန်.သံအတွက် ပြဿနာ မတက်လောက်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော် အားရပါးရ ချောင်းဟန်.နေရပါသည်။
ဒါတောင် ကားမှတ်တိုင်မှာ ချောင်းဟန်.မိ၍ ရည်စားစုံတွဲတွေက မျက်စောင်းထိုးတာ၊ စတိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာ ချောင်းဟန်.မိ၍ အရောင်းစာရေးမတွေက ဘုတောလွှတ်တာ၊ အန္တရာယ်မရှိလောက်ဘူးထင်ပြီး ချောင်းဟန်.မိရာက သူ.ဟာသူ
မလုံမလဲ ကိစ္စ တစ်ခုခု ရှိနေသောသူများ၏ ရန်သတ္တရုပြုတာကို ခံနေရပါသည်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ကျွန်တော် အိမ်ငှားနေသော အိမ်ရှင် အန်တီကြီးနှင့် ပြဿနာ တက်ရခြင်းဖြစ်၏။ အန်တီကြီးက သားနှစ်ယောက်အမေ မုဆိုးမ ဖြစ်၏။ သားအကြီးက ကျွန်တော်ထက် နည်းနည်းလောက်ပဲ ငယ်မည်။ သားတွေ အိမ်ထောင်ကျကုန်တော့ သားအကြီးက မွေးသည့် မြေးကလေး တစ်ယောက်နှင့် နေသည်။ အိမ်တစ်ခြမ်းကို ကျွန်တော့်အား ငှားသည်။
ကျွန်တော် သူတို. မိသားစု အားလုံးနှင့် ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေပါသည်။ အိမ်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ချောင်းဟန်. ချောင်းဟန်. ပြဿနာ မတက်ခဲ့ပါ။ အဲသည်နေ.ကလည်း ရုံးသွားခါနီးမို. အန္တရာယ် ကြိုတင် ဖြေရှင်းထားသည့်အနေနှင့် အားရပါးရ ချောင်းဟန်.နေမိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အန်တီကြီး ခြေသံပြင်းပြင်း နင်းလာသည်အထိ ကျွန်တော် သဘောမပေါက်သေး။ ချောင်းဟန်.ကောင်းတုန်း။
“ ဘာသဘောလဲကွယ့်၊ မင်းဟာက လွန်လွန်းလာပြီ”
“ခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော် ဘာလုပ်မိလို.လဲ အန်တီ”
“ဒီမယ် အဲဒါ ငါ့မောင် သုံးဝမ်းကွဲ တော်တယ်။ ခမျာ ရိုးရိုးသားသား ၀င်ထွက်နေတာ။ မင်းက လှောင်သလို ပြောင်သလို တဟမ်းဟမ်းနဲ.၊ တစ်ရက်မဟုတ် နှစ်ရက်မဟုတ်၊ မလာရဲတော့ဘူးတဲ့ ၊ ပြန်သွားပြီ။ ဒါ မင်း တရားခံပဲ”
“ဟာ အန်တီ ကျွန်တော် ဒါတွေ လုံးဝ မသိရိုး အမှန်ပါ။ ဒီလူ.ကိုလည်း မသိပါဘူး။ သိဦးတော့ ကျွန်တော်နဲ.မှ မဆိုင်တာ။ ခုဟာက အကျင့်ပါ”
“အို တော်ပြီ တော်ပြီ။ ဒီလို ရိုင်းပျတဲ့ လူမျိုး ငါ့အိမ်မှာ ဆက်မထားနိုင်ဘူး။ မင်း အိမ်ရှာပါ။ လကုန်ရင် ပြောင်းတော့၊ ဒါပဲ”
အန်တီကြီး ဘာကြောင့် သည်လောက် ဒေါသထွက်သွားသလဲ။ ချောင်းဟန်.သံက အိမ်မှ နှင်ချလောက်သည်အထိ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားသလား။ သူ မကြိုက်မှန်း သိရင် ဘယ် ခုလို အားရပါးရ ချောင်းဟန်.ပါ့မလဲ။ ခုတော့ ဘာမှ ရေရေရာရာ မသိရခင်မှာပင် ကျွန်တော် အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းခဲ့ရပါသည်။
“ဖြစ်ကြောင်းရယ် ကုန်စင် ရာဇ၀င်ကတော့ အဲဒါပါပဲ ဆရာ။ ကျွန်တော် ရိုးရိုး ဆရာဝန်နဲ.လည်း ပြပြီးပြီ။ လည်ချောင်းအထူးကုနဲ.လည်း ပြပြီးပြီ။ ဓာတ်မှန်ရိုက်၊ သလိပ်စစ်၊ လည်ချောင်းကို မှန်ပြောင်းနဲ.ကြည့်၊ ဘာရောဂါမှ မရှိဘူးတဲ့။ နောက်ဆုံး ဆရာ့ဆီ လမ်းညွှန်လိုက်လို. ရောက်လာတာပါပဲ”
စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးသည် ကျွန်တော် ပြောသမျှက်ို စိတ်ရှည် လက်ရှည် နားထောင်၏။ ခေါင်းတဆတ်ဆတ် ညိတ်နေမိ၏။
“အေးဗျာ၊ ခင်ဗျားဟာက စိတ်ရောဂါ အဆင့်ထိ မရောက်သေးပါဘူး။ အကျင့်ပါနေတာပဲ။ အကျင့်ဆိုတာ မွေးရာပါ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လက်ခံထားမိတဲ့ အမူ အကျင့်တစ်ခု ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ စွန်.ပစ်ရမှာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကုရမှာ၊ ဘယ်သူမှ ၀င်ကုပေးလို. မရဘူး။ အဲဒီတော့….”
“ဒီအကျင့်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မကောင်းဘူး။ ငါ့အတွက်လည်း မကောင်းဘူးလို. ဒီလို ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ပြဋ္ဌာန်းပါ။ ပြဋ္ဌာန်းပြီးရင် ဒီအကျင့်ကြီးကို မပျောက် ပျောက်အောင် ဖျောက်မယ်၊ အများနည်းတူ နေမယ်လို. ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၊ သန္နိဋ္ဌာန်ချပါ။ အဲဒီလို စိတ်ကို ပြဋ္ဌာန်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် ခင်ဗျားရဲ.
အကျင့်ကြီး ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် အကြံပေးသလို စမ်းကြည့်ပါ။ ဟုတ်လား”
ကျွန်တော် ဆရာဝန်ကြီး ရုံးခန်းက ထွက်လာတော့ ခြေလှမ်းတွေ သွက်နေပါသည်။ ခေါင်းထဲမှာလည်း ပေါ့ပါးကြည်လင်နေသည်။ ဆရာဝန်ကြီးပြောတာ သဘာဝကျပါ၏။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်၊ ကိုယ့်အတွက်လည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အကျင့်ကြီးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြိုးစားဖျောက်ဖျက်ပစ်ရမယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 11:21 AM
သဘောလည်းကျတယ်....ဆရာတစ်ဦးက ပြန်ဖေါ်ပြီး ရေးညွှန်းလုပ်ထားတာ...
သူတောင် စာဖတ်ရင်း လည်ချောင်းယားလာတယ်ဆိုပြီး..
ပြန်ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးဘဲ။
စာတွေ Share ပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်
ခုလို ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကောင်းကင်ကို…